UNHCR oo Taliyaaniga ku eedeysay inuu dayacay qaxootiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR, ayaa ku eedeysay dowladda Talyaaniga in ay dayacday oo ay goobo gaadiidka la dhigto uga tagtay qaxooti boqolaal ah oo aan haysan raashiin iyo lacag ay wax ku iibsadaan.
UNHCR ayaa sheegtay in ay tahay wax aan la aqbali karin qaabka loola dhaqmay dadkaan qaxootiga ah oo ka kala yimid Soomaaliya, Suuriya iyo dalalka saxaraha ka hooseeyo, kuna sugnaa magaalooyink Roma iyo Milan.
Afhayeenka UNHCR ee dalka Talyaaniga Carlotta Sami ayaa sheegtay in dadkaan qaxootiga ah ay u soo gurmadeen hay’ado qaabilsan magan-galyo siinta dadka qaxootiga ah kadib markii saraakiil ka socota Talyaaniga ay dadkaas dayaceen.
Carlotta, ayaa xustay in dowladda Talyaaniga ay mas’uuliyad ka saaran tahay sidii ay ugu yaraan wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan ugu heli laheyd dadka qaxootiga marka ay gudaha Talyaaniga soo galaan.
Taliyaaniga ayaa maaro u la’ qaxooti Afrikaan ah, kuwaasoo dalkaas ka gala dhanka wadamada woqooyiga Afrika.